Igwe anaghị agba nchara Seteel Pillow Block
Thermoplastic Ohiri Isi Block igwe anaghị agba nchara na-agba
* Tụkwasị na ala agba
Bọọlụ Ndidi A kọwara
Ball Belerances Explained you ghọtara ibu nnagide na ihe ha pụtara n'ezie? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nọghị naanị gị. A na-ekwukarị ihe ndị a mana ọtụtụ mgbe na-enweghị nghọta ọ bụla nke ihe ha pụtara. Ebe nrụọrụ weebụ nwere nkọwa dị mfe banyere ndidi na-adịkarị obere yabụ anyị kpebiri t ...
Ndụmọdụ iri maka idozi mmezi nke ọma.
Kedu ihe jikọrọ elekere, skateboard na igwe ọrụ mmepụta ihe? Ha nile na-adabere na bebi iji kwado mmegharị ntụgharị ha dị mma. Agbanyeghị, iji nweta ntụkwasị obi, ekwesịrị ịchekwa ma dozie ya nke ọma. Nke a ga - eme ka ndụ dị ogologo, na - egbochi ọtụtụ nsogbu ...
Mmebi site na Ibu Ibu / Contactkpụrụ Kpọtụrụ RCA: Ahụkarị DGBB Runces Traces
Pdị ọsọ ọsọ nke Deep Groove Ball Bearings (A) na-egosi ihe kachasị agba ọsọ na-agba ọsọ mgbe mgbanaka dị n'ime na-agagharị n'okpuru ibu ọrụ naanị. (E) site na (H) na-egosi ụzọ dị iche iche na-agba ọsọ nke na-eme ka ndụ dị mkpụmkpụ n'ihi mmetụta ọjọọ ha na biarin. (A) Mgbanaka dị n'ime rotati ...
Nchịkwa ụtụ isi nke China bipụtara ọkwa ụbọchị ole na ole gara aga, ma eleghị anya ọnụahịa akụrụngwa ga-arị elu ọzọ !!
Gọọmentị na-ahụ maka ụtụ isi nke China na nso nso a wepụtara ọkwa banyere ịkagbu nkwụghachi ụtụ isi mbupụ maka ụfọdụ ngwaahịa nchara. Nke a nwere ike ime ka akụrụngwa bilie ọzọ. Ahịa ndị nwere na-adịbeghị anya zuo atụmatụ na-arịọ iji kwadebe n'oge. Ikekwe ọnụahịa nke raw ma ...
Nhọrọ Nhọrọ Rolling - Lee Anya na Nnukwu Foto
Mgbe ị na-ewere ndụ ndụ niile kama ị na-akwụ ụgwọ ịzụrụ naanị n'ime akaụntụ, ndị ọrụ njedebe nwere ike ịchekwa ego site na ikpebi maka ojiji nke ọkwa dị elu. Linggbagharị agbagharị bụ ihe ndị dị egwu na-agbanwe agbanwe, igwe na akụrụngwa, gụnyere ngwaọrụ igwe, ijikwa syst ...
Ihe niile na-emebi n’elu ụwa ha na-akpata nsogbu? Corlụso Corrosion na Design Design
Ruo pasent 40 nke ihe ọkụkụ nwere ike ịla n'iyi n'ihi ihe ịchọ mma nke ụfọdụ nnukwu ụlọ ahịa. Ezie na akwukwo nri ndi nwere ike ghara ibu ihe kachasi nma, o nwere otu ihe oriri dika ihe ndi ozo. Iburu mmebi nke ihu nwere ike iburu ọtụtụ ndị ...
Ayszọ iji gbasaa ọrụ ndụ maka ngwa ngwa dị elu
Eyi na dọkatụrụ adọka ndammana erughị oge maka ọ bụla amị. Maka akụkụ ndị a na-eji na ngwa ngwa ọsọ ọsọ, mmetụta na-adịghị mma nke iyi na akwa nwere ike bụrụ isi okwu n'oge na-adịghị anya. Ngwa ngwa ngwa na-eme ka nsogbu dịịrị maka ọdịmma gị: ụfụfụ na esemokwu. Enweghị ezigbo p ...
Kedu otu esi ahọrọ izi ezi nke agba?
Requirementsrụ ọrụ chọrọ Ihe atụ Kwesịrị ekwesị ọkwa ziri ezi Ebe a na-etinye ozu chọrọ inwe ezigbo runout ziri ezi Audio na vidiyo igwe (ihe ndekọ vidiyo, teepu teepu) Rada, parabolic antenna shaft Machine tool spindle Electronic computer, disk spindle Aluminium foi ...
Iguzogide okpomọkụ na nrụgide - na-ebu atụmatụ maka ntụkwasị obi na gburugburu oke.
Enwekwu ọchịchọ iji melite ntụkwasị obi n'ofe ụlọ ọrụ pụtara na ndị injinia kwesịrị ịtụle akụkụ niile nke ngwa ha. Usoro na-ebu ibu bụ akụkụ dị oke egwu na igwe ma ọdịda ha nwere ike ibute ọdachi na oke ọnụ ahịa. Eburu imewe nwere isi mmetụta pụrụ ịdabere, espe ...
Belata mmetọ ma meziwanye ndụ
Ebubata mmanu bụ otu n’ime ihe na-ebute mbibi ma bụrụkwa isi ihe na - akpata mbibi n’oge ọmụmụ. Mgbe ihe na-arụ ọrụ na gburugburu ebe dị ọcha, ọ ga-ada site na njedebe, ike ọgwụgwụ ụwa mana mgbe usoro ahụ merụrụ ahụ, ọ nwere ike igosi ...
Otu esi belata ọbara ọgbụgba
Mmanụ ọbara ọgbụgba ma ọ bụ nkewa mmanụ bụ okwu e ji na-ezo aka griiz nke wepụtara mmanụ n'oge ọnọdụ (nchekwa) ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ ọfụma. Na ọnọdụ static, a na-amata ọbara ọgbụgba site na ọnụnọ nke obere ọdọ mmiri, ọkachasị mgbe mmanụ griiz adịghị ewepụ ma ọ bụ mgbede ...
6 BEBỌCH BE AKW SEKWỌ A NA-AK .KỌ
A 、 ZZ - Djá mkpuchi akàrà na abụọ nke amị Jiri Environment ： Nkịtị moto, ájá na-àmà na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi。 Uru ： Low cost, Low amalite torque, na elu okpomọkụ na ala okpomọkụ na-arụ ọrụ ọnọdụ nwere ike ịbụ eluigwe na ala. Ọghọm: ： Oghere akara ahụ buru ibu (n'ozuzu abo ...